‘‘कुम्भमेलाका बारे जनमानसमा मह¤व बढ्दै गएको छ’’ | चितवन पोष्ट दैनिक
‘‘कुम्भमेलाका बारे जनमानसमा मह¤व बढ्दै गएको छ’’
२०७० चैत्र १४, शुक्रबार ०२:३२ गते
पूर्वी नेपालको सुनसरी चतराको बराहधाममा एक महिनाभर कुम्भमेला लाग्दैछ । पीण्डेश्वर पूर्ण कुम्भमेलाकै अवसर पारेर बराहधाममै अवस्थित रामानन्दचार्य सेवापीठले पनि विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सो पीठका प्रमुख संरक्षक श्री १००८ श्री वैष्णव डा. कृष्णदासजी महाराज (सिद्धयोगी) हुनुहन्छ । वनस्पति शास्त्रमा विद्यावारिधिसमेत गर्नुभएको उहाँले २०६५ सालमा बराहधाममा ९ दिनसम्म बिनाअक्सिजन भूसमाधि लिनुभई विज्ञानलाई नै चुनौती दिन सक्षम हुनुभएको थियो ।
प्रस्तुत छ, नाडी विज्ञानका ज्ञातासमेत रहनुभएका सिद्धयोगी डा. कृष्णदासजी महाराजसँग सो कुम्भ महोत्सवकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानीका मुख्य–मुख्य अंशहरु ः
१) बराह क्षेत्रमा कुम्भमेला लाग्दैछ । यस कुम्भमेलाका बारेमा केही बताइदिनुस् न ।
– यही चैत्र १७ गते (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) देखि २०७१ वैशाख १९ सम्म बराहधाममा पीण्डेश्वर पूर्ण कुम्भ महोत्सव गर्दैछौँ । हुन त, यसअघि वि.सं. २०४५ चतरामै निवासी अन्वेषक कविमान बज्राचार्यको पहलमा पूर्वप्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालबाट उद्घाटन भई कुम्भ महोत्सवको सुरूवात भएको थियो । प्रथम प्रयासले पनि होला, व्यापक प्रचारप्रसारको अभावका कारण त्यस महोत्सव सम्पूर्ण हिन्दुहरुको आस्था बन्न सकेन । तर पनि नेपाल भूमिमा कुम्भ स्नानको प्रारम्भ गरेर नेपाल भूमिको गौरव बढाउने काम भयो ।
त्यसपछि जगद्गुरू बालसन्त श्री मोहनशरण देवाचार्यज्यूको अग्रसरतामा २०५९ वैशाख संक्रान्ति देखि जेष्ठ संक्रान्तिसम्म पूर्ण कुम्भमेला सम्पन्न भएको थियो भने अर्धकुम्भमेला पनि आयोजना भइसकेको छ । प्रत्येक १२ वर्षको अन्तरालमा नै पवित्र नदीकिनारका पुण्यस्थलहरुमा कुम्भमेला लाग्ने गर्दछ । यसअनुरुप यसपटक पनि पिण्डेश्वर कुम्भ महोत्सव आयोजना गरिएको हो ।
२) कुम्भमेला किन लगाउने गरिन्छ ?
— कुम्भ (अमृत कलश) का बारेमा हाम्रा शास्त्रमा धेरै उल्लेख भएका छन् । शास्त्रीय मान्यताअनुसार नै कुम्भको आयोजना गरिएको हो । स्कन्द महापुराणमा यसको वर्णन गरिएको छ, जसमा पूर्वकालमा पृथ्वीको उतराखण्ड हिमालयको काखमा अवस्थित क्षीरसागर (दूधकुण्ड) का तटमा समुद्र मन्थन गरिएको थियो । सो क्रममा उत्पन्न अमृत कलशमा लागेको अमृतको तरबाट निर्मित पिण्डलाई शिवलिंग बनाई पिण्डेश्वर महादेवको रूद्राक्षारण्यको मध्यभागमा स्थापना गरियो । यसरी समुद्र मन्थनबाट निस्किएको अमृतलाई भगवान् विष्णुले मोहिनी रुप धारण गरी देवताहरुलाई पान यही स्थान बराह क्षेत्रमा गराउनुभएको थियो ।
यसरी पिण्डेश्वर महादेवको स्थापना र प्रतिष्ठा गरेपछि पिण्डेश्वर भगवान्बाट आशीर्वाद पाएको खुसीयालीमा भगवान् विष्णुले यसै कोशीको किनारमा आई प्रथम कुम्भ स्नान गरी कुम्भ स्नानको आरम्भ गर्नुभएको शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । शास्त्रमा कुम्भ स्नानको मह¤वबारे पनि धेरै उल्लेख भएको छ । मानवले कुम्भ स्नान गर्नैपर्दछ । यो पूर्ण कुम्भका अवसरमा शुद्ध भएर एक महिनासम्म कौशिकी तटमा बस्दा एक कल्पसम्म तपस्या गरेको फल प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ ।
३) गत साल भारतको प्रयागमा कुम्भमेला आयोजना भएको थियो । त्यहाँ करोडौँ भक्तहरु उपस्थित थिए । त्यसैको सिको नेपालमा पनि गरिँदै छ भन्छन् नि ?
– यो बिल्कुल सिको गर्न खोजिएको होइन । मैले माथि बताइसकेँ, कुम्भको ऐतिहासिकताबारे । वर्तमानमा कुम्भमेलाका बारे जनमानसमा मह¤व बढ्दै गएको भने पक्कै छ । आवश्यक खोज, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रचारप्रसार र हाम्रा संस्कारहरुको संरक्षण संवद्र्धनमा चासो कम राखिएकोले यो अवस्था आएको हो । यस्तो मह¤वपूर्ण अपार भूमि भइकन पनि लाखौँ हामी नेपाली कुम्भ स्नानका लागि दक्षिणाभिमुख भइरहेका छौँ । हामीले नजिकको तीर्थको मह¤व चिन्न सकेका छैनौँ । यस्ता मेलाले नै नेपालको धार्मिक स्थलको महिमा त बढ्नेछ नै, अझ धार्मिक पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ । नेपालको विकासका लागि धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण तथा संवद्र्धनले पनि ठूलो टेवा मिल्दछ । अध्यात्मबाट भौतिक विकास गर्न सक्छौँ । अध्यात्म र भौतिक दुवै सँगसँगै एकै दिशामा हिँडाउन आवश्यक छ । सम्पूर्ण धर्म अनुरागीहरुलाई यो कुम्भ स्नान गर्न आमन्त्रण पनि गर्दछु
४) कुम्भमेलाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ला र ?
– नेपाल भूमि कस्तो छ भने यहाँको हिमाल साक्षात् शिव भगवान्, यहाँको ढुंगा साक्षात् नारायण, यहाँको माटो जगत् जननी भगवती श्री सीताजी हुन् । यहाँको वनस्पति धनवन्तरी भगवान् हुन् भने यहाँको नदीमा अमृत धारा प्रवाहित भएको छ । यस्तो देवभूमि नेपालमा हामीले जन्म लिन पाएका छौँ । हाम्रो संस्कार र संस्कृति पूर्ण विज्ञानमय छ । जुन संस्कृति आज हामी परित्याग गर्दैछौँ, त्यही संस्कृति पश्चिमाहरुले अपनाएर उनीहरु आविष्कारक बनेका छन् । उनीहरु सभ्य र शिक्षित कहलिएका छन् । यस्तो दिव्य संस्कार र संस्कृतिबाट आज हामी टाढिँदै गएका छौँ ।
तीर्थ क्षेत्रको विकासको आधार यस्ता मेला, पर्वहरु हुन् । छिमेकी मुलुक भारतलाई नै हेरौँ । बनारसको आबादी लगभग ३५ लाखको छ, उनीहरु कति समृद्ध छन् । गंगाजीकै कारण त्यहाँको विकास भएको हो । ३५ लाखको आबादी पालित र पोषित तीर्थकै विकासले भएको हो । इलाहवादको आबादी ४० लाखजति छ । त्रिवेणी संगममा अवस्थित प्रसिद्ध तीर्थ प्रयागराजकै कारण इलाहवादको विकास निर्माणमा सम्भव भएको हो । हरिद्वारदेखि कुमाउ गढवालसम्मको क्षेत्र जुन छ, त्यो उत्तराञ्चलमा पौने २ करोडको आबादी छ । त्यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रिनाथ, देवप्रयाग, रूद्रप्रयाग आदिआदि छन् । त्यहाँको एउटा ढुंगालाई पनि जगत् प्रख्यात गरिएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन गरिएको छ । तीर्थस्थलका कारण नै त्यो राज्य अलग भएको हो । गंगाजीको आरतिमा मात्र एक दिनमा ५०–५५ करोड संकलन हुन्छ । संसारको कुन यस्तो मल्टिनेसनल कम्पनी होला, जहाँ यत्रा मान्छेले रोजगार पाएका छन् ! एउटा सामान्य व्यक्तिले पनि गंगाकिनारमा अगरबत्ती बेचेर दिनको ४–५ सय कमाउँछ ।
नेपालमा पनि धेरै धामहरु छन् । तिनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सक्यौँ र त्यसको महिमा यत्रतत्र फैलाउन सक्यौँ भने तिनको विकासका लागि आश्रित हुनै पर्दैन । धार्मिक तीर्थयात्रीहरुबाट सम्मान, इज्जत, प्रेम पाउँछन्, अन्यबाट भन्दा पनि । धार्मिक यात्रीहरुमा श्रद्धा, सद्भाव अनि भाइचाराको सम्बन्ध भेटिन्छ । हाम्रो देशको तीर्थ र धामलाई हामीले चिन्न सकेका छैनौँ । हाम्रो धाम र तीर्थको समुचित व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेका छैनौँ ।
५) कुम्भमेलाका अवसरमा रामानन्दाचार्य पीठबाट के–कस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हाम्रो पीठले यस अवसरमा धेरै कार्यक्रम गर्न लागेको छ । विशेषगरी आत्मालाई परमात्मासँग जोड्ने महायोग साधना कार्यक्रम यस मेलामा पनि गर्दैछौँ । मेला अवधिभर बिहान ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म महायोग साधना दीक्षा तथा शक्तिपातद्वारा कुण्डलिनी शक्ति जागरणको कार्यक्रम हुन्छ । हरेक दिन बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म विष्णु सहस्रनाम, राम सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, वेद–पुराण, दुर्गा सप्तशती, मन्त्र, पूजा, सबैको पाठ, गोदान, जन्म कुण्डली अध्ययन, ग्रहशान्ति तथा हवन, आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा नाडी परीक्षणका साथै मन्त्र, ग्रह, औषधि तथा योग उपचार आदि कार्यक्रम गर्दछौँ ।
हरेक दिन दिउँसो २ बजेदेखि ०५ बजेसम्म कथा सिद्ध सन्त, सत्पुरूषहरुबाट प्रवचन, कथा सत्संग हुन्छ । साँझ ५ बजे उप्रान्त सन्ध्या आरति, भजन–कीर्तन, आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, झाँकी एवं कवि सम्मेलन, चैत्र १७ गते पर्ने रामनवमीको अवसरमा १०८ श्री रामचरितमानस पाठ पारायण र श्रीराम कथा, वैशाख २ गते पर्ने हनुमान जयन्तीको अवसरमा चतराधाममा नै ६४ फिट अग्लो श्री हनुमानजीको मूर्तिको प्राण–प्रतिष्ठा, वैशाख २ गतेदेखि १२ गतेसम्म ११ दिवसीय सिद्धमहायोग ध्यान साधना कार्यक्रम, मेला अवधिभर नेपालमा जडीबुटीहरुको बृहत् प्रदर्शनी तथा सम्मेलनलगायतका कार्यक्रमहरु हुुँदैछन् ।
६) जडीबुटीको बृहत् प्रदर्शनी किन आवश्यक छ ?
– संसारमा एकमात्र नेपाल यस्तो राष्ट्र हो, जहाँ प्रत्येक २–२ महिनामा हावापानी परिवर्तन हुन्छ । भारततर्फ पनि दक्षिणतर्फ गयौँ भने ४ बटा मात्र ऋतु पाइन्छ । कुनै मुलुकमा २ र कुनैमा ३ अन्टार्टिकामा १ मात्र ऋतु छ । यस्तो पावन नेपाली हामीले १५–२० वर्षदेखि ठूलो मार खेपेका छौँ । नेपाल लेवर कन्ट्री उत्पादन गर्ने राष्ट्र भएको छ । हिजोको दिनमा बाहिर जाँदा नेपालीहरु सम्मानित पोस्टमा जान्थे, आज त्यो अवस्था छैन । यस्तो पवित्र राष्ट्र मैले अघि नै भनिसकेँ कि यहाँका पर्वत शिव हुन् । ६ प्रकारको ऋतुले सम्पन्न, संसारभर मा भएका ३१ लाख वनस्पतिमा दुनियाँमा नपाइने १४ हजार प्रकारको दिव्य वनस्पति नेपालमा मात्र पाइन्छ । संसारमा नै असाध्य बनेका क्यान्सर र एच.आई.भी. एड्सलाई दूर गर्न सक्ने यदि क्षमता, विद्या र त्यो फर्मुलाको साथै त्यो जडी कहीँ छ भने नेपालमा नै छ । यो हामीले देख्न सकेका छौँ । नेपालमा आएर मैले १५ सयभन्दा बेसी क्यान्सर रोगीलाई ठीक गरिसकेको छु । तर, त्यो कुन स्केलमा छ भने साधुको गोजीको खरानीजस्तै छ । त्यसको राष्ट्रिय तहबाट डब्लु एच ओसम्म पु¥याएर मान्य बनाउन सकेका छैनौँ ।
वर्तमानको शरीर–विज्ञानबारेमा पढ्दा र प्राचीन आयुर्वेद शास्त्रको अध्ययन गर्दा धेरै अन्तर पाउँछौँ । जति सूक्ष्म विज्ञान आयुर्वेदको छ, त्यति वर्तमानको मेडिकल साइन्सले दिन सकेको छैन । यो फूलको बिरूवामा कति प्रतिशत पानीको मात्रा छ, कति प्रतिशत आकासको, कति प्रतिशत वायु, कति प्रतिशत अग्नि छ भन्ने कुरा वर्तमानको विज्ञानले बताउन सक्दैन, तर आयुर्वेद विज्ञानबाट सम्भव छ यस विज्ञानले मात्र हाम्रो स्थूल शरीरको मात्र चिरफार गरेर हेर्न सकेको छ । हाम्रो पूर्वीय विज्ञानले हाम्रो शरीरभित्र भएको सूक्ष्म शरीर त्यसभित्र प्राणमय, त्यसभित्र पनि मनोमय त्यसभित्र पनि आनन्दमय, र त्यसभित्र पनि विज्ञानमय शरीरको चिरफार गर्न सक्छ । आज विदेशीले विमानको, टेलिफोनको आविष्कार ग¥यो भन्छौँ तर म भन्छु, यो सबै हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको विज्ञान हो । शून्यको मान र यो पृथ्वीमा गुरूत्वाकर्षण शक्ति पश्चिमाहरुले पत्ता लगाएका भनेर पढ्छौँ । हाम्रो ज्योतिषशास्त्रमा युगौँदेखि कुन ग्रह, कुन कक्षमा छ, कति समयमा कुन, कति फन्का घुम्दछ ,पृथ्वी कति कुन भागमा उठेर बसेको छ । यस्ता सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको माइल–माइल, इन्च–इन्च नापेर हाम्रो खगोल शास्त्रमा राखेको छ ।
मेडिकल साइन्सको विकास भएको २ शतक पनि भएको छैन । त्योभन्दा पहिले यो धर्तीमा अरबौँ वर्षदेखि मनुष्य छन् । के तिनीहरु बिनाचिकित्सक नै रहेका थिए ? त्यसमा खोज, दृष्टि हुनुपर्छ । हाम्रा पुर्खाहरु कसरी रहे, कुन पद्धतिले दीर्घजीवी भए, त्यसका लागि कुन विधि अपनाएका थिए– त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ । ब्रह्म विद्या दिनेवाला, ४ पदार्थ दिनेवाला यस्तो आयुर्वेद आज हामीले आत्मसात् गर्न सकेका छैनौँ । यदि मात्र हामीले हाम्रो देशको जडीबुटीलाई चिनेर त्यसलाई सुरक्षित गर्न सक्यौँ भने, हरित क्रान्ति अभियान गर्न सक्याँै भने १५ करोडसम्मका नेपालीले बाहिरबाट १ दाना चामल ल्याएर खान पर्थेन ।
७) रामानन्दाचार्य पीठको अभियानका बारेमा बताइदिनुहुन्छ कि ?
— म बाल्यावस्थादेखि नै विदेशमा बसेर अध्ययन गरेँ । विदेशमा मानसम्मान पनि छ, तर योे शरीर नेपाल धर्तीमा जन्मेको नाताले मानसम्मान, पीठ, पीठाधीश सबै त्यागेर जन्नभूमि फर्केको छु । मेरो जन्मभूमिप्रति मैले लगानी गर्नैपर्छ भन्ने सोचले म नेपाल आएको हुँ । म विरक्त साधु हुँ, मलाई केही चाहिएको छैन । त्यसैले, म पूर्ण छु । अभाव नै बन्धन हो, बन्धनले मान्छेलाई दुःखी बनाउँछ तर पनि यसको बोध हामीले गर्न सकेका छैनौँ । हामी धेरै क्षेत्रमा परजीवी बनिरहेका छौँ । मैले जे पाउनु पर्ने हो त्यो पाइसकेँ, अब दिनुपर्ने के भन्ने मात्र हो ।
हाम्रोमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । कुनै पनि कोणबाट हामी कमजोर छैनौँ । पिता, पुर्खाहरुको यो भूमि अपार छ । हामी सम्पूर्ण रुपले स्वावलम्बी बन्न सक्छौँ, समृद्ध बन्न सक्छौँ । हामीले त्यो सक्षमता पाएका छौँ । मानव स्वास्थ्यका लागि आवश्यक योग, आयुर्वेद विद्या र जडीबुटी नैसर्गिक हामीसँग छ । यसबाट नै मानवीय मनोदोषहरु निराकरण गर्न सक्दछौँ, चित्तलाई शुद्ध बनाउन सक्तछौँ र शरीरलाई स्वस्थ राख्न सक्तछौँ । मानवको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य र ऊर्जा नै राष्ट्रको ठूलो सम्पत्ति हो । त्यसैले गर्दा महायोग ध्यान साधनाको कार्यक्रम र आयुर्वेद विश्वविद्यालयको अवधारणाका साथ म नेपाल आएको हुँ । नेपालका ५ विकास क्षेत्रमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खडा गरेर नेपालीलाई स्वावलम्बी बनाउने मेरो उद्देश्य हो । त्यसैका लागि एकान्तको जीवन त्यागेर यो अभियानमा जुटेको छु । यसअनुरुप रामानन्दाचार्य पीठका माध्यमबाट महायोग एवं आयुर्वेदका विभिन्न अभियानहरु सञ्चालित भएका छन् । गत वैशाखमा भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादबाट आयुर्वेद कलेजको पनि शिलान्यास भइसकेको छ भने देशका विभिन्न ठाउँहरुमा महायोगको कार्यक्रमहरु पनि भइरहेका छन्
८) महायोग साधना कस्तो साधना कार्यक्रम हो ?
— योग भूमि नेपालबाट लोप भैसकेको सिद्ध योग नै महायोग हो । महायोग समर्पणको मार्ग हो । चित्तवृत्तिको निरोध नै योग हो । साधना र विकास क्रममा यसका खासगरी चार प्रकार देखिएका छन्– मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग र राजयोग । महायोग यी सबै योगको जननी हो । यो हाम्रो भूमिको विद्या हो, जुन लोप भइसकेको अवस्था छ । यस विद्यालाई जगाउने संवाहक मात्र म हँु । साधकले यस साधनामा जिज्ञासु भएर बसिदिए मात्र पुग्छ । योग गर्ने विषय होइन, योग त स्वतः आफैँ हुन्छ । व्यक्तिको शरीरको अवस्थाअनुसार नै योगको क्रिया हुने गर्दछन् ।”
९) अन्तमा, केहि भन्नु छ कि ?
— यस वर्षको सन्धिमा महासिद्धिप्रद पूर्ण कुम्भ पर्व पर्दछ । यस पावन अवसरमा कुम्भ स्नानका लागि चतराधाम आउनुहुन सबैलाई आमन्त्रण गर्दछु । यो विशेष अवसर हो । यसै अवसरमा तपाईं सबैका विशेष हितको लागि एक महिनासम्म विशेष कार्यक्रम हुने पनि जानकारी गराइसकेको छु । यस अवसरबाट कोही वञ्चित नहून् भनेर फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु ।